1 & 2 Soosaarayaasha PCB Lakabka | Shiinaha 1 & 2 Lakabka PCB Warshad & Shirkado
2 guddiga wareega lakabka qufulka elektarooniga ah smart
Kani waa lakabka wareega 2 lakabka wareega guriga ee elektarooniga ah. UL shahaado ShengYi S1141 FR-4 tg130, 1.0mm dhumucdiisuna, 1 OZ (35um) dhumucdiisuna copper, dhammaystirka dahabiga dhameystiray, maaskaro cagaaran Alxan iyo shaashad xariir cad. Maaddaama ay tahay guddi yar, PCB-ga ayaa loo dhiibaa guddiga 20 * 3 = 60 PCS guddi kasta. Qaabka guud ee tilmaantu waxay isticmaashaa daloolka shaambadda iyo ku shubashada CNC. Dhammaan wax soosaarku waxay kuxiran yihiin shuruudaha RoHS.
2 guddiga wareega lakabka HASL Lead Lead Free
Kani waa guddiga wareega 2 lakab ee alaabta dib loo cusboonaysiin karo. UL shahaado ShengYi S1141 FR-4 tg130, 1.6mm oo dhumucdiisuna, 1 OZ (35um) dhumucdiisuna copper, HASL hogaanka dhamaadka, free maaskaro Alxan iyo shaashadda xariir cad. 3 kumbiyuutarrada kumbuyuutarrada ee guddi kasta oo leh qaabeynta qaabeynta V-Cut. Dhammaan wax soosaarku waxay kuxiran yihiin shuruudaha RoHS.
2 guddiga wareegga lakabka dahaadhay PCB god kala badh for shey Sensor
Kani waa guddiga wareegga lakabka 2 oo leh dalool nus ah oo loogu talagalay sheyga dareeraha. UL shahaado Shengyi S1141, FR-4 tg130, dhumucdiisuna 1.6mm, 1.5 OZ (50um) dhumucdiis naxaas ah, maaskaro Alxan cagaaran iyo shaashad xariir cad. PCB-ga ayaa ku jira QR-code si loo garto. Dhammaan wax soosaarku waxay kuxiran yihiin shuruudaha RoHS.
1 & 2 lakabka PCB \_ RoHS waafaqaya 2 lakabka FR4 PCB
Kani waa guddiga wareegga lakabka 2 oo leh dhammaystir dahab dhammaystiran. Qeexitaannadu waa heer, FR4 tg130, dhumucdiisuna 1.6mm, 1 OZ (35um) dhumucdiis naxaas ah, maaskaro iibiye cagaaran iyo shaashad xariir cad. Maaddaama ay tahay guddi yar, PCB-ga ayaa loo dhiibaa guddiga 20 * 3 = 60 PCS guddi kasta. Qaabka guud ee tilmaantu waxay isticmaashaa daloolka shaambadda iyo ku shubashada CNC. Dhammaan wax soosaarku waxay kuxiran yihiin shuruudaha RoHS.